‘ओली सत्ताका लागि पर्फेक्ट खेलाडी हुन्’ ‘ओली सत्ताका लागि पर्फेक्ट खेलाडी हुन्’ Canada Nepal
‘ओली सत्ताका लागि पर्फेक्ट खेलाडी हुन्’
मोनीका सिंह जेठ २५ २०७८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सत्ता रक्षा गर्न र उनको विकल्पमा सरकार बनाउने दुुई ध्रुवमा मुलुकको राजनीतिक महिनौँ दिनदेखि अड्किएको छ । ओली सरकारको विकल्पमा सत्तारुढ एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूह, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर बुुझाए ।
अघिल्लो दिन विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिपल्ट आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर बुुझाउन पुगे । राष्ट्रपतिबाट दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक यही जेठ ८ गते विघटन गरे । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर तथा ओली र देउवालाई संविधानको धारा ७६(५)अनुुसार प्रधानमन्त्री बनाउन छुट्टाछुट्टै रिट सर्वाेच्च अदालतमा परेको छ । उक्त रिटहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
यही पेरिफेरिमा रहेर क्यानडानेपाले गरेको कुराकानीका क्रममा कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले ओली सत्ताका प्रफेक्ट खेलाडी रहेको टिप्पणी गरे । ‘ओली सत्ता जान र रहन जे पनि गर्न सक्छन्, उनी सत्ताका प्रफेक्ट खेलाडी हुन्’, नेता गिरीले भने, ‘तर, आफूले चालेको कदमले देश र जनतालाई कस्तो असर गर्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन् ।’
ओलीले आफ्ना कमिकमजोरीको ढाकछोपका लागि राजनीतिमा टिएर ग्याँस हानिरहने गरेको बताएका नेता गिरीले भने, ‘केही न केही नयाँ कदम चालेर राजनीतिमा टिएर ग्यास हान्ने गरेका छन् । जनतालाई पनि अब ओलीले के गर्लान् भन्ने चासो बढाएर आफ्नो कमिकमजोरी लुकाउने प्रयास गर्छन् ।’
साथै घोषित मितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरेका नेता गिरीले कांग्रेसको पनि निर्धारित समयमै महाधिवेशन हुने जानकारी दिए । अन्यथा प्रधानमन्त्री ओलीको सहायता लिएर कांग्रेसको वैधानिकता रक्षा गरिने उनको भनाइ छ ।
जेठ २५, २०७८ मंगलवार ११:१५:०७ बजे : प्रकाशित
ओली भर्सेस प्रचण्ड : कसले लियो बदला ? यस्तो छ पर्दा पछाडिको खेल
काठमाडौं । नेपालको राजनीति अहिले प्रतिशोधपूर्ण अवस्थामा छ । शक्तिशाली दलहरु चिरा परेका छन् । मुलुक संकटमा परेका बेला दलहरु प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक गरिरहेका छन् ।
प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गर्नेमा अग्रभागमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिएका छन् । र बाँकी रहेका दलहरु उनीहरुको सारथी बनेका छन् । जनताले बहुमतको सरकार दिए पनि नेताहरुले मुलुकलाई अस्थिरतामा लगेर आ–आफ्नै डम्फू बजाइरहेका छन्, सत्ताको म्युजिकल चयर खेलिरहेका छन् ।
साढे तीन वर्ष अघि शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको बोइङ जहाज उडाएका दुई क्याप्टेन ओली र प्रचण्डले अहिले आफ्नो विमान दुर्घटनामा पारेका छन्, घाइते र मुर्छित अवस्थामा रहेका यात्रुहरुले आफ्नो नेता र पार्टी चिन्न नसकेर प्यानल परिवर्तन गरेका छन् ।
नेकपा नामक बोइङ उडाएका ओली र प्रचण्डको टकरावले सो जहाज दुर्घटनामात्रै परेन, मुलुक नै अस्थिरत राजनीतिकको भड्खालोमा परेको छ । र फेरि एकपल्ट नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक चरित्र जनतामाझ प्रष्ट्याएका छन् ।
कसको के दाउ ?
ओली र प्रचण्डले एकअर्कालाई राम्रैसँग चिन्दथे । उनीहरुको राजनीतिक चरित्र र व्यवहारबारे दुवै जानकार नै थिए । तर, २०७४ सालको निर्वाचनमा एक्कासि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गर्न उनीहरु किन राजी भए ? सायद एउटै घरमा रहेर एकअर्काको राजनीति सिध्याउने र आफू कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको शक्तिशाली व्यक्ति बन्ने दाउ थियो कि ?
तत्कालीन ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको काँधमा चढेर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराए । ओलीको राष्ट्रवादको अगाडि कांग्रेस र माओवादीले घुँडा टेके । अर्थात स्थानीय तहमा एमालेले नै बर्चश्व जमायो ।
यसपछि आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको लज्जास्पद हार हुने प्रचण्डले बुुझे । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तासाझेदार कांग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादीलाई मत नदिएको प्रचण्डले थाहा पाए ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताले कम्युनिष्टलाई भोट नदिने बुुझेका प्रचण्डले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कसरी माओवादीको इज्जत जोगाउने भन्न चिन्ता लिइरहेका थिए ।
दुई दलबीचको सहमतिअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्नपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । देउवाले गराउने निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले मत पाउनेमा प्रचण्ड सशंकित बने ।
यस अवस्थामा माओवादीको शान जोगाउन प्रचण्ड चाहन्थे । उता निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर बनाउने सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना एमाले अध्यक्ष ओलीले देखेका थिए । तर, कसरी ? यहीँनिर ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता गर्ने र शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार बनाउने निर्णयमा पुुगे । र सरकारको आलोपालो नेतृत्व लिने सहमति पनि गरे।
यस धरातलबाट एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा गठन भयो । निर्वाचनबाट दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएर नेकपाले ओली नेतृत्वको सरकार बनायो । तर, अल्पायुमै नेकपा सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । नेकपा खारेज भयो र ओली र प्रचण्ड आ–आफ्नो बाटो लागे ।
कसले लियो बदला ?
कुनै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी भन्ने पार्टी नै सकिने र कार्यकर्ता शीला खोजेको जसरी खोज्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँथे । यसले प्रचण्डलाई पनि मन दुखेको हुनुपर्छ । सत्ता आरोहणको लालसमा पार्टी एकीकरण गरेका ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमतिले विवाद निम्त्यायो । सरकार बनाएको दुई वर्ष र पार्टी एकीकरण गरेको डेढ वर्षमै नेकपाभित्र भाँडभैलो भयो । कसको शक्ति कति ? कसले कसलाई देखाइने ? जस्ता प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिले नेकपालाई खारेज मात्रै गरेन, जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिएको भारी बहुमतको अपमान पनि भयो ।
जनताको मतको मान र अपमान आफ्नै ठाउँमा रह्यो । ओली र प्रचण्ड एक अर्काविरुद्ध रणनीतिक रुपमा चल्न थाले । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिबाट पछि हटेका ओलीलाई पार्टी र सत्ताबाट हटाउन प्रचण्डले एमालेकै नेताहरुलाई उकासे र प्रयोग गरे । आफू र आफ्नो सरकारविरुद्ध लागेका प्रचण्ड, आफ्नै नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरुको राजनीतिक भविष्य नै सखाप बनाउने गरी ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदको भरपूर शक्ति प्रयोग गरे ।
गत फागुन २३ गतेको सर्वाेच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतायो । यसपछि ओली एमालेका अध्यक्ष भए भने प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका । साविक नेकपामा प्रचण्ड समूहमा रहेका एमालेका नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसालसहितका नेताहरु प्रचण्डको साथमै रहे । तर, न उनीहरुले एमालेका नेताको हैसियत प्राप्त गरे, न त माओवादी केन्द्रमै जान सके ।
उता साविक नेकपामा ओली समूहलाई साथ दिएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीसहितका माओवादीका नेताहरुले ओलीलाई छाडेनन् । उनीहरुले एमालेमै राम्रो स्थान पाए । तर, ओलीको कारबाहीमा परेर पार्टीको साधारण सदस्यसमेत गुमाएमा नेपाल–खनाल समूहका नेताहरु ‘वल्लो घाट न पल्लो तिर’को अवस्थामा छन् ।
२०७४ सालमा माओवादीको शान जोगाउन पार्टी एकता गरेका प्रचण्डले अहिले एमालेलाई छिन्नभिन्न बनाइदिए । एमालेको ठूलो समूह ओलीविरुद्ध छ । ओली सरकारको विकल्पमा नेपाल–खनाल समूहले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सघाइरहेको छ । लामो समय एमालेको नेतृत्व गरेका नेता नेपाल अहिले एमालेविरुद्ध नै कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्डले ल्याइपुर्‍याइदिएका छन् । आशा लाग्दा युवा नेतालाई प्रचण्डले एमालेबाट अलग्याइदिएका छन् ।
उनीहरु कहिले एमालेको मूल प्रवाहमा देखिन्छन् भने कहिले नेपाल समूहको गुटमा पुगिसक्छन् । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने थलो भनेको आफ्नै पार्टीको बैठक हो । तर, नेपाल–खनाल समूहले लामो समय पार्टीको बैठक बहिस्कार गरेको थियो । बैठकमा सहभागी हुने नहुनेबारेमा नेपाल समूहले प्रचण्डसँग सल्लाह गरेको खबरले मुलुक दलीय अनुशासनहिनतामा रहेको देखिएको आरोप लाग्यो ।
सत्ता र शक्तिका लागि पार्टी एकीकरण गरेका ओली र प्रचण्डले जनताको मतको अपमान मात्रै गरेनन्, ठूलो दुःख र संघर्षले आर्जेको आ–आफ्नो पार्टीलाई चकनाचुर बनाए, कम्युनिष्ट पार्टीको बद्नाम गरे । उनीहरुले एकअर्कासँग कस्तो बदला लिए, उनीहरु नै जानून । तर, आफ्नो पार्टी र देश र जनतालाई हराएर सत्ता र शक्तिका लागि भने अहिले पनि उनीहरु ताण्डव नृत्य देखाइरहेका छन् ।
जेठ १७, २०७८ सोमवार १३:३७:१८ बजे : प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीज्यू, महाकाली सन्धिले नभएर अब गिट्टी बालुवा बचेर देश समृद्ध बनाउने ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो उद्देश्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ रहेको बताउँदै आएको छ । यो सरकारले हालै लगातार चौथो बजेट ल्याएको छ ।
यही जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको आगामी आर्थिक वर्षको सम्भावित आयव्यय विवरण अर्थात बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
सो बजेटका विभिन्न विषयमाथि बहस भइरहँदा तराई मधेशलाई नै मरुभूमि बनाउने गरी गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न दिने गरी समेटिएको बुँदाप्रति भने चौतर्फी विरोध भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७८को प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर १९९मा अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्त्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा न्यूनिकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गनए आयातमा लाग्नने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’
अर्थात सरकारले गिट्टी बालुवा बेचेर मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, सँगै करमा पनि छुट दिने बताइएको छ । तर, सरकारको सो निर्णयले तराई मधेशको भूमिलाई मरुभूमि बनाउने भन्दै सच्याउन प्रदेश २ सरकारले आग्रह गरेको छ ।
साथै तराई मधेशको जलस्रोत र रक्षाकवचको रुपमा रहेको चुरे पहाड सकेर भारतमा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न दिने संघीय सरकारको नीति सच्याउन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर आग्रह गरेका छन् ।
तर, यता संघीय सरकारसम्बद्ध अधिकारीहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै निकासी दिने निर्णय गरेको बताएका छन् । चुरे संरक्षण बिना तराई नजोगिने जानकार सरकारले गिट्टी बालुवा निकासी गर्न दिने निर्णयले सो क्षेत्रलाई भने जोखिम बढाएको छ ।
कुनै बेला महाकाली सन्धि गरेवापत एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आउने बताएका तत्कालीन एमालेका नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले गिट्टी बालुवा बचेर मुलुक समृद्ध बनाउने सपना देखेका हुन् ।
महाकाली सन्धि गर्दा केपी ओलीले भनेका थिए, समृद्धिको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउनेछ
२०५३ असोज ४ गते मध्याराति संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ओलीले सो सन्धिवापत मुलुकले एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पाउने बताएका थिए । सो रकम आयो आएन, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै थाहा होला, तर अहिले गिट्टी बालुवा बेचेर मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने सपना पनि देखेका छन् ।
२५ वर्ष अघि महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा तत्कालीन एमाले नेता ओलीले भनेजस्तो अहिले मुलुकमा समृद्धि छायो छाएन सबैसामू छर्लङ्ग छ ।
महाकाली सन्धिअनुसार उत्पादन हुने विजुली बेचेर नेपालले एक खर्ब २० अर्ब रुपैया पाउने बताएका ओलीले भनेका थिए’, समृद्धिको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउनेछ ।’
महाकाली सन्धिले लिपिम्याधुरा, कालापानी र लिपुलेक गुमाएको हो ? हेर्नुहोस् यस्तो छ सन्धिको पूर्णपाठ
महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेको २५ वर्ष भइसक्दा पनि समृद्धिको सूर्य भने उदाउन बाँकी छ । तर, सोही सन्धिका कारण भारतले अहिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमाथि कब्जा जमाइरहेको छ ।
जेठ २१, २०७८ शुक्रवार १२:३१:२९ बजे : प्रकाशित
# गिट्टी बालुवा
# देश समृद्ध
हाम्रो पनि पहुँच भएको भए मेरो बाबा बाच्नु हुन्थ्यो : आदर्श मिश्रा (भिडियो)
काठमाडौं । कमेडी रियालिटी शो 'कमेडी च्याम्पियन'को पहिलो सिजनका एक चर्चित प्रतिस्पर्धी आदर्श मिश्राले आफ्नो बुवा गुमाएपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कत्ति लापरवाही हुन्छ भनेर खुलेर बोल्न थालेका छन् ।
केही समय अघि बुवालाई गुमाउनु परेको पिडालाई सहेर सरकारी अस्पतालदेखि प्राइभेट अस्पतालहरुले कत्तिसम्म लापरवाही गर्छन् भन्ने बारे आदर्श मिश्राले आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत जानकारी दिन थालेका छन् । मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि आफ्नो बुवा बिनोद मिश्राले करिब ४ वर्ष देखि डायलिसिस गरेर बाँचिरहेका थिए तर अस्पतालले बिरामीलाई समयमा डायलिसिस नगर्दिने र सहज तरिकाले डाइलोसिस नगरिदिंदा बुवालाई गुमाउनु परेको पिडा आदर्शले पोख्न थालेका छन् ।
मृगौला प्रत्यारोपण सम्म गर्न खोजेको तर नेपालमा पहुँच नहुदा सोचे जस्तो काम नहुने भएकोले प्रत्यारोपण गर्ने योजना सफल हुन नसकेको समेत जिकिर गरेका छन् मिश्राले । क्यानडा नेपालसंग कुराकानी गर्दै मिश्राले भने, "बाबाको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न हामीले धेरै कोशिश गर्यौं तर हाम्रो पहुँच पुगेन होला त्यसैले सरकारी तहबाट साथ सहयोग पाएनौ । त्यसैले ४ वर्षदेखि निरन्तर डाइलोसिस गरिरहेका छौं ।"
डाइलोसिस भनेको मृगौला फेल हुने बिरामीको लागी ठूलो कुरा हो तर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुनै हेक्का नै छैन जुन हाम्रो परिवारले ४ वर्षदेखि भोगिरहेका छौं । नेपालको स्वास्थ्य छेत्र यत्ति लापरवाही छ कि मैले बाबा गुमाउनु पर्यो ।" आदर्श मिश्राले भने ।
आफूले सरकार र विरगंज को अस्पतालको लापरवाही बारे बोल्दा आफ्नो पिडामाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेको गुनासो समेत पोखेका छन् । आदर्श मिश्राका अनुसार आफू गलत बिरुद्द अझै खुलेर बोल्ने जसका कारण आफ्नो परिवारले पाए जस्तो पिडा अरुले नपाउन ।
जेठ २४, २०७८ सोमवार १४:५७:०३ बजे : प्रकाशित
बिप्लव र श्रीमती पहिलोपल्ट मिडियामा देखाए झुपडी घर, यत्ति सामान्य जीवन सुनाए दुख सुखका कथा
काठमाडौं । नेपाल कमन्युष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द 'बिप्लव' को दम्पती पहिलोपल्ट मिडियामा आएर देखाए आफ्नो झुपडी घर ।
बिप्लवको श्रीमती शुभद्रा मल्ल पहिलोपल्ट मिडियामा आएर आफ्नो दुख सुखका कुराहरु सुनाएकी छिन् । दुई छोरा र एक छोरीलाई पढ्न छोडेर आफू श्रीमान संगै भूमिगत बसेको बताएकी शुभद्राले आफूलाई झुपडीमा बस्दा आनन्द आउने कुरा खुलाएकी छिन् ।
नेताहरुको श्रीमतीले ठूलो घर गाडीको रहर राख्ने तर बिप्लवको श्रीमती झुपडीमा बस्दा दुख लागेन भन्दा श्रीमती शुभद्राले भनिन्, "मेरो श्रीमानले देश र जनताको लागी आफ्नो जीवन भूमिगत रहेर बिताउनु भएको छ । मेरो कर्तव्य र धर्म हो श्रीमानको लागि सुख सुविधा त्यागेर वहाँको सोचमा हिड्न । म खुशी छु कि आज जनताले मेरो श्रीमानलाई साथ दिनुभएको छ ।"
बिप्लव दम्पती अहिले दुई कोठाको झुपडीमा बसिरहेका छन् । यहि झुपडी घर पछाडी भने एउटा पक्का घर बनाउदैछन जुन उनलाई पार्टी र शुभचिन्तकको सहयोगमा बनिरहेको छ । आफू बसेकै निवास नजिकै पार्टी कार्यालय पनि बनिरहेको बिप्लवले उल्लेख गरेका छन् ।
आषाढ ४, २०७८ शुक्रवार २३:३७:०१ बजे : प्रकाशित
‘दीपक मनाङे वाल्मिकी बन्न सकेनन् र मन्त्री पदका लागि एमालेलाई धोका दिए’
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्री पदका लागि राजनीति समीकरण परिवर्तन गर्न पुगेका बताएका छन् ।
गुरुङ नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने निर्णायक मत प्रदान गरेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मनाङेले विपक्षी गठबन्धनको सरकार निर्माणमा निर्णायक मत दिएका थिए । स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेका मनाङेको भोटले गुरुङ सरकार ढलेर अहिले कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
गुरुङ सरकारमा मनाङे मन्त्रीसमेत थिए । तर, मन्त्री हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्वमा लिएका गुरुङलाई विश्वासको मत नदिएर मनाङेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन भूमिका खेलेका हुन् । पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन मत दिएर मनाङेले राजनीतिक नैतिकता गुमाएको आरोप लगाए ।
एमालेको सहयोगमा चुनाव जितेर आएका मनाङेलाई आफूूले मन्त्री बनाएको भए पनि अन्तिममा धोका दिएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन गएको नेता गुरुङको भनाइ छ ।
एमालेको सहयोगमा मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्य चुनाव जितेका मनाङेलाई उनकै आग्रहमा मन्त्री बनाएको बताएका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तिममा आएर मन्त्री बन्नका लागि आफ्नो राजनीतिक निष्ठाबाट च्यूत भएको बताए ।
क्यानडानेपालसँगको विशेष कुराकानीमा पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेको राजनीतिक चरित्रमाथि टिप्पणी गर्दै ‘सबै डाकु वाल्मिकी हुँदैन भनेको हो रहेछ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको आरोप लगाए ।
मनाङेले मन्त्री पदका लागि राजनीतिक मर्यादासमेत उल्लंघन गरेको लगाएका गुरुङले मन्त्री हुनकै लागि चुनाव जिताएको दल एमालेको सरकार ढालेर विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन समर्थन गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
एक फरक प्रसङ्गमा पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब नेकपा एमालेको एकताका लागि ध्यानकेन्द्रीत गर्नुपर्ने बताए । एकताबद्ध एमालेलाई कसरीले पछि पार्न नसक्ने भन्दै उनले यसका लागि अब पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमालेकै नेतादेखि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने भन्दै हिँडेकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । जनमतले पाँच वर्ष सरकार चलाउन म्यान्डेट दिएको भएपनि ओलीलाई हटाउन अराजनीतिक चरित्र नेताहरुले देखाएको उनको टिप्पणी छ ।
अहिले पनि एमाले एक भएर अघि बढेमा अरु दलले पछि पार्न नसक्ने ठोकुवा गरेका एमाले नेता गुरुङले एमालेको एकताका लागि सबै नेताहरु जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आषाढ ६, २०७८ आइतवार १२:०९:२५ बजे : प्रकाशित